युरोपियन गोल्डेन बुटमा मेस्सीलाई जित्न सक्लान् त एम्बाप्पेले, आज छिनोफानो हुँदै , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
युरोपियन गोल्डेन बुटमा मेस्सीलाई जित्न सक्लान् त एम्बाप्पेले, आज छिनोफानो हुँदै
काठमाडौं। युरोपियन गोल्डेन बुटको छिनोफानो आज हुँदैछ । आज राती फ्रान्सको लिग वनमा पिएसजी र स्टेड रेम्स खेल्दैछन् । यो खेलसँगै यो सिजनको लागि गोल्डेन बुटको छिनोफानो हुनेछ । यो खेलमा पिएसजीका युवा खेलाडी किलियन एम्बाप्पेले कति गोल गर्न सक्छन् भन्ने कुरालो गोल्डेन बुटको फैसला हुनेछ ।
अहिलेसम्म यगोल्डेन बुटको दौडमा शीर्ष स्थानमा बार्सिलोनाका लियोनेल मेस्सी छन् । दोस्रो स्थानमा पिएसजीका किलियन एम्बाप्पे छन् । मेस्सीले ला लिगामा ३६ गोल गरेका छन् र उनको ला लिगाको सबै खेल सकिइसकेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेका एम्बाप्पेको ३२ गोल छ र उनी फ्रान्सको लिग वमा एक खेल खेल्न बाँकी छ । त्यो एक खेल आज राती हुँदैछ ।
यदि आज राती एम्बाप्पेले ४ गोल गर्न सके भने मेस्सीसँग गोल्डेन बुट बाँड्नेछन् । उनले ४ भन्दा धेरै गोल गर्न सके भने गोल्डेन बुट उनी एक्लैको हुनेछ । तर आज उनले कम्तीमा ४ गोल गर्न सकेन् भने गोल्डेन बुटको हकदार मेस्सी हुनेछन् । यो सिजनको गोल्डेन बुटमा एम्बाप्पेले मेस्सीलाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरिए पनि एम्बाप्पे पछिल्ला ३ खेलमा प्रतिबन्धमा परेपछि पछि परेका हुन् ।
यद्यपि एम्बाप्पेको लागि यो असम्भव भने छैन । गएको अक्टोबरमा एम्बाप्पेले लियोनसँगको खेलमा १३ मिनेटभित्र एक्लै ४ गोल गरिसकेका हुन् । उनी अहिले पनि उच्च फर्ममा छन् । उनको फर्मलाई हेर्दा उनले केही चमत्कार गरिहाल्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न भने सकिँदैन ।